Simeone Oo Fahfaahiyay Sababta Ay Ugu Badan Tahay Inay Xagaagan Barca Ku Guulaysan Karto La Liga
Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa haatan hogaanka uhaysa horyaalka La Liga ee wadanka Spain xili ay leedahay 21 dhibcood oo nadiif ah. Atletico Madrid waa naadiga Jiifta kaalinta afaraad xili ay shaqaysatay 19 dhibcood, halka Alaves ay…
Antoine Griezmann Oo Shuruud Adag Ku Xiray Inay Kooxdiisa Xagaagan Hanato La Liga
Abdirahman	 Oct 16, 2018
Markii ugu dambeysay oo ay Atletico Madrid ku guuleysatay horyaalka La Liga waxay ahayd sanadkii 2014-kii. Laakiin, gooldhaliyahaan reer France ayaa rumeysan inay mar kale sanad ciyaareedkan ay kor-uluxi karaan tartankaan. Griezmann oo…
Antoine Griezmann Oo Shaaciyay Waxa Ku Dhiirogelisay Inuu Iska Diido Aadista Barcelona
Barcelona ayaa aad udooneysa soo qaadashada ciyaaryahankaan, balse, isaga ayaa ugu dambeyntii go'aan saday inaanu bixin. Diego Costa ayaa todobaadkii hore sheegay in wiilkaan reer France uu uqaatay go'aankani, sababo ku aadan inuu jecel…
Griezmann Oo Si Lama Filaan Ah Uga Jawaabay Hadii Ay Atletico Xagaagan Hanan Karto La Liga
Abdirahman	 Oct 15, 2018
Antoine Griezmann ayaa kalsooni aanan buurnayn ku qaba inay kooxdiisa Atletico Madrid ay fasal ciyaareedkan ku guuleysan karto horyaalka La Liga ee dalka Spain, xili dhowr kulan laga ciyaaray. Kooxda yar ee Sevilla ayaa waqti xaadirkaan…
Hadii Uu Guriga Isaga Hagaajiyo, Sababta Uusan Socodka U Badan U Jeclayn & Griezmann Oo Ka…
Weerar yahankaan udhashay wadanka Faransiiska ayaa sheegay in xaaskiisa lagu magacaabo Erika ay sameyso wax kasta oo ku saabsan Gurriga, balse wuxuu qirtay inuu caawiyo. "Gurigeyga waxaa sameeyey xaaskeyga," ayuu yiri, isaga oo wareysi…
Costa Oo Shaaciyey Arrin Oo Uu Ka Carooday Taasi Oo Ay Samey Ku Dhaheen Maamulka Chelsea
Abdirahman	 Sep 29, 2018
Diego Costa ayaa fahfaahin dheeri ah ka bixiyey sababta keentay inuu isaga soo dhaqaaqo naadiga ka dhisan Galbeedka London ee Chelsea. Gooldhaliyahaan udhashay Spain ayaa kasoo tegay Blues sanadkii 2017, isaga oo iska dhiibey naadiga…
Diego Costa Oo Kabaha La Dul-marey Maamulka Chelsea Xili Uu U Jeediyey Eedaymo Culus
Abdirahman	 Sep 28, 2018
Diego Costa ayaa wuxuu shaaca ka qaaday ka qaadey in ka tegitaana Chelsea ay tahay mid keentay is-fahanlaa soo kala dhex-galay isaga iyo maamulka Chelsea. Gooldhaliyahaan udhashay Spain ayaa wuxuu ka tagay Blues sanadkii 2017-kii, isaga oo…
Diego Simeone Oo Ka Hadlay Rajadda Uu Ka Qabay In Griezmann Uusan Marnaba Ku Biiri Doonin Barca
Maamulaha naadiga Atletico Madrid ninka lagu magacaabo Atletico Madrid ayaa shaaca ka qaaday in uusan marnaba ku fekerin in Antoine Griezmann uu ku biirayo Barcelona. Bluagrana ayaa xiiso waali ah u qabtay wiilkaan udhashay wadanka…
Diego Simeone Oo Si Cajiib Ah Uga Hadlay Hadii Thibaut Courtois Uu Boos Joogto Ah Ka Helayo Real…
Thibaut Courtois ayaa fasal ciyaareedkan kusoo biiray naadiga Real Madrid, isaga oo kasoo dhaqaaqay Chelsea, halkaasoo uu sanado badan ku sugnaa. Diego Simeone, oo ah maamulaha naadiga uu horey ugu soo dheelay Shabaq-ilaaliyahaan reer…
Antoine Griezmann Oo Dhaliilo Culus U Jeediyay Xiriirka Kubada Cagta Dunida – Muxuu Ku Saluugay?
Abdirahman	 Sep 10, 2018
Kadib markii xiriirka kubadda cagta aduunka ee FIFA uu ku dhawaaqay liiska ciyaartoyda saddexda ah eek u tarmaysa abaalmarinta THE BESTa ayaa waxaa si kulul udhaleeceeyey arrintaasi Antoine Griezmann. 27-sano jirkaan ayaa dalkiisa…